Oge nke ụbọchị maka Jenụwarị 22: akụkọ banyere Saint Vincent nke Zaragoza | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Imirikiti ihe anyị maara banyere onye nsọ a sitere n'aka onye edemede bụ Prudentius. Ọrụ ndị ọrụ ya na-achazi kpamkpam site n'echiche ha. Ma St.Augustine, n’otu n’ime okwuchukwu ya na St. Vincent, na-ekwu maka inwe n’ihu ya Ọrụ nke okwukwe ya n’ihi okwukwe ya. Anyị ji n’aka ma ọ dịkarịa ala ejide n’aka nke aha ya, na ọ bụ dikọn, ebe a ga-eli ya ma lie ya.
Dabere na akụkọ anyị nwere, nraranye pụrụ iche o nyere mmụọ nsọ aghaghi inwe ihe ndabere na ndụ dike. Vincent bụ onye e chiri site na enyi ya Saint Valerius nke Zaragoza na Spain. Ndị eze ukwu Rome bipụtara akwụkwọ iwu ha megidere ndị ụkọchukwu na 303 na n'afọ na-eso ya megide ndị nkịtị. Vincent na bishọp ya nọ n'ụlọ mkpọrọ na Valencia. Agụụ na mmekpa ahụ emeghị ka ha kwụsị. Dị ka ụmụ okorobịa nọ n’oké ọkụ, o yiri ka ha na-eme nke ọma n’ịhụju anya.
E zigara Valerio na mba ọzọ Daco, onye ọchịchị Rom, tụgharịrị oke iwe ya na Vincenzo. Agbalịwo ịta mmadụ ahụhụ nke na-ada n'oge a. Mana ihe kachasị ha bụ mbibi na-aga n'ihu nke Dacian n'onwe ya. O mere ka ndị na-emekpa ndị mmadụ ihe n'ihi na ha dara ada.
N'ikpeazụ, ọ tụrụ aro imebi iwu: Vincent ọ ga-ahapụrịrị akwụkwọ nsọ ndị a ga-akpọ ọkụ dị ka iwu eze ukwu si kwuo? Ọ gaghị eme nke ahụ. Ahụhụ dị na mmiri ahụ gara n'ihu, onye mkpọrọ ahụ nọgidere na-enwe obi ike, onye mmekpa ahụ jidere onwe ya. A tụbara Vincent n'ime ụlọ mkpọrọ ruru unyi wee gbanwee onye nche ụlọ mkpọrọ ahụ. Dacian bere ákwá na iwe, mana ihe ijuanya nyere onye mkpọrọ ahụ ka ọ zuru ike nwa oge.
Ndị enyi n’etiti ndị kwesịrị ntụkwasị obi bịara leta ya, mana ọ gaghị enwe ezumike n’ụwa. Mgbe ha mechara dozie ya n’elu akwa dị mma, ọ gara n’izu ike ebighi ebi ya.
Ndị nwụrụ n’ihi okwukwe ha bụ ihe atụ k’okpukpe nke ike nke Chukwu nwere ike ime. Ọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume mmadụ, anyị na-aghọta, maka mmadụ ịbụ onye a tara ahụhụ dị ka Vincent wee bụrụ onye kwesịrị ntụkwasị obi. Mana ọ bụkwa eziokwu na naanị ike mmadụ enweghị onye ga-ekwesị ntụkwasị obi ọbụlagodi na-enweghị mmekpa ahụ ma ọ bụ nhụjuanya. Chineke abiaghi izoputa anyi n'oge di iche ma puru iche. Chineke na akwado ndi ugbo ala na ugbo umuaka.